Hamza Choudhury Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Hamza Choudhury Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Hamza Choudhury Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha ya bụ "Choudhury". Anyị Hamza Choudhury Childhoodmụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe ya wdg.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-agbachitere onye na-agbachitere ụlọ nchebe, nke onye na-eme ihe ike Nke Marouane Fellaini mgbalị anya amateurish. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Hamza Choudhury's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Hamza Choudhury child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu- Ndụ mbido
Hamza Dewan Choudhury mụrụ na 1st ụbọchị nke ọnwa 1997 na nne ya, Rafia Dewan Chowdhury na Loughborough, obodo dị na Leicestershire United Kingdom. N'okpuru ebe a bụ foto nke Hamza na nne ya Rafia na stepdad Dewan Murshid Chowdhury onye dịka otu isi si kwuo bụ ndị ikwu ekele maka ọdịbendị Bangladesh.
Ndị nne na nna Hamza Choudhury- Nzọụkwụ Papa (Dewan Murshid) na mama m (Rafia). Ebe E Si Nweta SportsOnly.
Banyere ebe o si malite, Hamza sitere na mpaghara Caribbean na Bangladesh. Dabere na SportsOnly, ya mum si Habiganj ke Bangladesh mgbe nna ya n'ezie si mba Caribbean nke Grenadian.
Hamza nwere ma Asia na Caribbean na-ekele nne na nna ya site na onye si n'agbata ụlọ na-etiti. Dị ka otu n'ime ụmụ nwanne nne ya kwuru na ọ bụ onye a na-amaghị aha ya, nne Hamza jikọtara eriri ya na di ya Caribbean (nna Choudhury) tupu ya alụọ Dewan Murshid Chowdhury mgbe ọ gbasịrị. Hamza na nne ya, Rafia, nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị nọ na United Kingdom nọrọ.
“Ọ bụ ezie na a zụlitere m n'ezinụlọ Eshia, mana enwere m ọbara Caribbean dịka nna m si Grenada. Anyị nwere ezinụlọ buru ibu. ” Hamza Choudhury kwuru.
Hamza Choudhury child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
Ná mmalite, ihe niile Hamza chọrọ bụ ịghọ ndị ọkachamara ọkachamara. Ọchịchọ ya maka football hụrụ ya ka ọ debanye aha ya n'akwụkwọ ndekọ nke òtù ndị ntorobịa mpaghara Leicester FC bụ nke nyere ya ohere ịtọ ntọala dị mma.
Danny Rose Child Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
Ka Hamza Choudhury nọgidere na-etolite, ọ hụrụ onwe ya ka ọ na-edozi ndụ ya na Academy. Afọ ole na ole mbụ nke ọrụ ya hụrụ ya ka ọ bụrụ ụdị onye ọkachamara na-amaghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ịtụba ndị na-emegide ya ọgụ. A na-ahụ nke a na vidiyo dị n'okpuru.
N'ichezọ, ọ bụkwa onye ọkpụkpọ mara mma n'oge ọ bụ nwata. Nke a bụ otu mpempe vidiyo na-egosi nke a.
Hamza Choudhury child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu- Ụzọ Ebube
Hamza Choudhury mgbe ọ dị afọ iri na ụma mụtara ịzụ ahịa football ya bụ “ihe ị na-eme". Usoro uzo mara oke mma ya mere ka o di nma n'omume nile nke Leicester. Ịkụzi ụzọ dị mkpa nke ịlụ ọgụ na-ahụ ka Hamza na-aga n'ihu ma na-elele anya n'ọtụtụ klọb ndị England.
Egwuregwu bụ nkà furu efu na Leicester agụmakwụkwọ football, ma Hamza wetara ma mee omenala ochie na Leicester Academy. Dị nnọọ ka Phill Jones, ọ bụ ụdị ndị na-agba ụkwụ na-atụfu akụkụ ya nile ka ọ bụrụ ịwakpo. Lee vidio.
N'oge na-adịghị anya, Hamza Choudhury kwalitere onwe ya na ndị isi ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke Leicester mgbe ọ dị afọ 16. Ka oge na-aga, ọ ghọrọ onyeisi ndị a na-akwanyere ùgwù nke dugara ndị na-eso ụzọ ya na mmeri na asọmpi.
Hamza Choudhury enweghị ike ịhapụ Leicester obodo FC ndị nọ n'elu nchịkọta ịchụso Premier League nke 2015-2016. N'ụzọ dị mwute, ọ nweghị ike ịlụ ọgụ na kpakpando n'ụdị (Kante na Drinkwater) bụ ndị na-eme egwuregwu bọọlụ nke otu egwuregwu Premier League. Hamza kpebiri isonyere Burton Albion na mbinye ego. Mgbe ọ nọ na Burton, ọ gara n'ihu ịzụ ahịa ya.
Ị maara?… Nkọwa ego nke Hamza Choudhury nke ọma nyere aka na Burton Albion na-emeri nkwalite na Championship.
Hamza Choudhury child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu- Bilie na-ewu ewu
Na 28th ụbọchị nke November 2017, Hamza na nloghachi ya mere Premier League ya mbụ, ndekọ nke mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ mbụ nke agbụrụ Bangladesh na-egwu na Premier League.
Ka ọ dị na Disemba 2018, Hamza Choudhury malitere ịrụ ọrụ dị mkpa site na ụfọdụ ngosipụta na-egbukepụ egbukepụ nke gbanwere akara aka nke Leicester City. Ọganihu a na-ewu ewu hụrụ ya ka ọ na-eduga ndị otu ya na-agbaji Manchester City 2018/2019 na-agba ọsọ na-etikwa Chelsea. Onye gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ Leicester ji arụmọrụ ya na mmeri ndị a wee kwado onwe ya dị ka ndị otu egwuregwu mbụ. Ọ bụ n'ezie, mgbanwe dị nro. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Hamza Choudhury child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu- Ndụ mmekọrịta
N'azụ onye egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma site na nketa Bangladesh, e nwere egwu na-adọrọ adọrọ na onye Olivia nke gosipụtara ndụ ya n'ịhụnanya.
Hamza Choudhury na Olivia Fountain (Ebe E Si Nweta Instagram).
Dị ka ManchesterEveningNews, ndị enyi niile bụ otu afọ na ịhụnanya na-emekọ ụbọchị ọmụmụ ha ọnụ. Olivia bụ onye mmepụta ime ihe nwere ọtụtụ ndị ahịa na Leicester.
Ma Olivia, Hamza na nwa ha nwanyị mara mma na-ebi ndụ dị ala na Aylestone, nke dị na Leicester 13 kilomita site na Eze Power Stadium. Ebe obibi ya nwere ịnyịnya ibu mara mma.
Hamza Choudhury na nwa nwanyi na Nwainyinya (Ebe E Si Nweta Instagram).
Hamza Choudhury child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu- Ndụ nke Onye
Tomata ndụ nke Hamza Choudhury ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Ọ bụrụ na e nwere otu ihe Hamza Choudhury nwere mmasị dị ka football, ọ na-agba ịnyịnya kamel, ọrụ ọ na-atọ ya ụtọ ime mgbe ọ gara n’obodo ya bụ Bangladesh.
Hamza Choudhury na Camel.
Ndị na-egwu bọọlụ, dịka anyị ndị ọzọ, hụrụ anụ ụlọ ha n'anya na Choudhury abụghị otu. Nkwupụta na ọ nweghị iguzosi ike n'ihe fọdụrụ na egwuregwu nke oge a anaghị echebara mmekọrịta dị n'etiti Choudhury na nkịta ya.
Hamza Choudhury na Dog ya.
Hamza Choudhury child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Na ikpe site na foto nke obere Choudhury na nna nna ya, ị ga-eji aka ya mara agbụrụ ya.
Dị ka o kwesịrị, Choudhury tolitere n'ezinụlọ ezinụlọ dị obere n'etiti oge. Nke a bụ tupu ego bọọlụ bulie ezinụlọ ya elu. Taa, ndị ezinụlọ Bangladesh ya na ọtụtụ n'ime ha, ndị bi na Britain na Bangladesh nwere obi ụtọ na ha nwere Choudhury na ndụ ha. O doro anya na Hamza dị ka onye ọsụ ụzọ maka ndị egwuregwu Eshia.
Ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ n'ime otu afọ, Hamza wepụtara oge iji gaa na Bangladesh dị ka nne ya nọ ugbu a n'ụlọ ha Habiganj.
Ọ na-achọ ịhụ onwe ya na ọdịda Asia. N'ikwu okwu banyere nke ahụ, ọ kwuru otu oge;
'Anaghị m enwe nrụgide ọ bụla na m bụ ọkachamara sitere n'aka ezinụlọ Eshia. Ezinụlọ m enyerela m ezigbo aka. Ha na-agwa m ka m nwee mmasị n'egwuregwu m. Ọ bụrụ na m tụgharịa echi wee kwuo na achọghị m ịkụ bọl ọzọ ọzọ, ha ga-akwado m mgbe niile.
Hamza Choudhury child Story plus na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu- LifeStyle
Hamza Choudhury abụghị ụdị ndị na-agba ọsọ ndụ na-ebi ndụ Lavish nke a na-ahụkarị site na njedebe nke mara mma karịa ụgbọ ala na-adọrọ mmasị. Ego ego nke ego bọọlụ na-agba ya na-enye ya ohere ịzụrụ Mercedes-Benz ọ rapara na ya.
Agbanyeghị, Hamza amalitebeghị ụdị ndụ mmadụ na-ahụ naanị na ihe nkiri Hollywood. Dị ka e gosipụtara na mbụ, ya na ezinụlọ ya bi n'ụlọ ya na ala ịta ahịhịa nke Leicester.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Hamza Choudhury Childhood Akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akụkọ a na-enye nkọwa zuru oke. Abụ m ihe ọchị nke Leicester na onye ọkpụkpọ ahụ, agbanyeghị, ọ bụghị naanị ịmata onwe ya dị ka onye Asia.Ọ bụ nwa nke ụwa abụọ. Ọ bụkwa onye Africa. dị ka Nairobi.
Mohamed Taher Manai
Zaa Patrick M Masika
Ee ọ bụ n’ezie site na mba abụọ, mana ekwuru ebe a na ọ bụ caraebbe si na grenada mana ọ bụghị site na mba Africa!
Ma eleghị anya, ọ na-enwe obi ụtọ naanị banyere ndị nna nna ya Asia n'ihi na nna ya lekọtara ya anya, ma ọ bụ ghara ịjụ ajụjụ ọzọ banyere nwa ya mgbe ọ gbasịrị alụkwaghịm, nke mere na obi ya na-aga naanị n'akụkụ nne ya… naanị amụma